Booliiska Australia oo xiray wiil Soomaali ah oo fal argagixiso qorshaynayay – Awdal State Economic and Political Council
[ March 25, 2019 ] Backroom deals between Farmaajo and Musa Bihi will lead to nowhere and could ignite a major civil war among all the Somali clans: By Hamid Masheye	Somali News
[ March 24, 2019 ] Massive anti-Brexit march unfolds in London, with protesters demanding new referendum	Somali News
[ March 24, 2019 ] Somalia: Terrorist bombs, gunfire kill at least 10	Wararka Soomalida
[ March 24, 2019 ] Ethiopia in talks with China to ease ‘serious debt pressure’ tied to New Silk Road rail link, envoy says	Somali News
[ March 24, 2019 ] Horjoogaha SNM-ta hargeisa oo maanta qudbad akhriyay	Wararka Soomalida
HomeWararka SoomalidaBooliiska Australia oo xiray wiil Soomaali ah oo fal argagixiso qorshaynayay
Booliiska Australia oo xiray wiil Soomaali ah oo fal argagixiso qorshaynayay
November 28, 2017 Wararka Soomalida
Image captionNinkan ayaa lagu eedeeyay in uu qorshaynayay in uu bartilmaameedsado dabaaldegga sannadka cusub ee magaalada Melbourne
Booliiska Austrralia ayaa xiray nin ay ku eedeeyeen in uu qorshaynayay in uu qaado fal argagixiso marka ay magaalada Melbourne ka billowdaan munaasabadaha lagu xusayo sannadka cusub ee foodda inagu soo haya.
Wiilkan 20 jirka ah ayaa lagu soo oogi doonaa dacwado argagixiso kuwaas oo uu ku mutaysan karo xabsi daaa’in, sida ay masuuliyiintu sheegeen.
Booliiska ayaa ku eedeeyay in ninkan uu qorsheeyay in uu dadka ku toogto fagaaraha Federation Square oo ku yaalla bartamaha magaalada isaga oo adeegsanaya qori darandoori u dhaca.
Booliisku waxaa kale oo ay sheegeen in aysan hadda jirin halis ku soo fool leh dadwaynaha.
Masuuliyiintu waxay sheegeen in ninkan uusan haysanin hub darandoori u dhaca marka ay ku xireen Melbourne Isniintii.
“Waxa aan ku eeday doono waa in uu doonayay in uu adeegsado hub darandoori u dhaca uuna ku laayo intii dad ah ee uu awoodaba, sida uu Talaadadan sheegay Shane Patton oo ah taliye ku xigeenka booliiska Victoria.
Sannadkii hore 500,000 oo ruux ayaa sannadka cusub ku soo dhaweeyay bartamaha magaalada Melbourne.
Ma jiraan dad kale oo laga shakisan yahay
Patton wuxuu sheegay in wiilka laga shakisan yahay uu ku dhashay Australia waalidkiina ay Soomaali yihiin, booliiskuna ay la socdeen xaaladdiisa tan iyo bishii Janaayo.
Wuxuu tilmaamaha sida weerarrada argagixiso loo qaado ka helay Al-Qaacida isaga oo onlineka ka helay, wuxuuna taageersanahaa kooxda isku magacawda Dawladdda Islaamka, sida ay booliisku sheegeen.
Patton wuxuu sheegay in wiilku uu xiriiro la lahaa argagixiso balse aysan cidna ku wehelinin qorshaynteeda. Mana jirto cid kale oo lala xiray
Dawladda ayaa jartay waraaq fasax ah oo lagu baarayo gurigii uu wiilku daganaa, ganacsiyadii uu ka shaqeeyay iyo guryaha dadkii ay qaraabadaha ahaayeenba.
Xiritaanka ayaa lala xiriiriyay hawlgallo horay loo sameeyay sida ay booliisku sheegeen.
Sannadkii horana booliisku waxay sheegeen in ay fashiliyeen weerar argagixiso oo wayn oo la rabay in la fuliyo ciiddii Masiixiyiinta ee Christmas-ka, waxaana la sheegay in meelaha lagu bartilmaameedsan lahaa ay ka mid ahaayeen fagaaraha Federation Square.
Booliiska Australia ayaa 74 ruux dacwado argagixisanimo ku soo oogay tan iyo sannadkii 2014kii, markaas oo heerka macquulnimada in ay falal argagixisanimo dhacaan sare loo qaaday.
Uhuru Kenyatta oo loo dhaariyay xilka madaxweynenimada KenyaSaacad ka hor
Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay Maraykanka duqayn karto
Backroom deals between Farmaajo and Musa Bihi will lead to nowhere and could ignite a major civil war among all the Somali clans: By Hamid Masheye
Archives (Keeydka) Select Month March 2019 January 2019 December 2018 November 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016